DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-11AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos” | Laashin iyo Hal-abuur
DHAAYAHA SAXAAFADDA Q-11AAD W/Q: Xasan Maxamed Xaaji “Duusoos”
Sooyaalka filimada-2 Xilligii aamusnaanta hore:
Qodobbada ugu waaweyn ee filimka aamusnaanta iyo filimka codka ah ilaa 1927-dii inta badan sawirrada dhaqdhaqaaqa waxaa la soo saaray iyagoo aan cod lahayn. Muddana waxaa badanaa loo yaqaannay xilligii aamusnaanta ee filimka. Si kor loogu qaado khibradda daawadayaasha, filimada aamusan waxaa inta badan la socday muusikiyeyaal toos ah oo ku jira koox muusiko ah, xubin tiyaatarka ah iyo mararka qaarkood sawaxanka iyo xitaa faallooyinka uu ku hadlo showman ama projectionist. Waddamada badankood, turjumooyin ayaa loo isticmaalay in lagu bixiyo wada hadal iyo sheeko filimka, sidaasna ay ula wadaagaan wariyeyaasha, bale, shineemooyinka Jabban, dadka wax sheega ee loo yaqaan benshi waxay caan ku ahaayeen inta lagu jiro xilliga aamusnaanta. Dhibaatooyinka xagga farsamada ah waxaa la xalliyay 1923-dii.
Heesaha sawirradu waxay ahaayeen kuwo caan ah marka laga reebo isbeddelladan oo ka billaabmay 1894-guryaha vaudeville oo ku sii adkaystay dabayaaqadii 1930-kii tiyaatarada filimka. Waxqabadka tooska ah ama duubista dhawaaqa waxaa lagu lammaaneeyey iskeelka muraayadaha midabbada leh ee lagu saadaaliyay qalabka wax lagu dhejiyo iyo qalabka la midka ah. Sidan oo kale, sheeko ayaa lagu muujiyey iyada oo loo marayo qaab taxane ah oo isbeddelladoodu ay isku mar ahaayeen horumarka sheekada. Ujeeddada ugu weyn ee heesaha sawirrada ahi waxay ahayd in la dhiirri-galiyo iibinta muusikada xaashida ah, waxayna si aad ah ugu guuleysteen iyadoo iibku gaaray malaayiin hal hees ah. Goor dambe, markii uu dhashay filimku, heesaha sawirrada ah ayaa loo isticmaalay inay yihiin qalab wax lagu buuxiyo ka hor filimada iyo intii lagu guda jiray isbeddellada gooldhalinta.
Filimkii ‘1914’, The Photo-Drama of Creation wuxuu ahaa isku day aan ganacsi ahayn inuu isku daro sawirka mootada, isku dhafyo kala kaan ah iyo inuu is waafajiyo sawirka socda iyo codka. Filimku wuxuu ka koobnaa bogag gacmo lagu rinjiyeeyay iyo sidoo kale farsamooyin kale oo horay loo adeegsaday. Isla mar ahaantaana la maqlo codka inta filimka lagu jilayo borojektar ayaa loo baahday. Waxaa soo saaray Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Markhaatiyaasha Yehowah), riwaayaddaas siddeed saac ee bible-ka ah waxaa lagu soo bandhigayay 80-magaalo maalin kasta, ku dhawaad siddeed milyan oo qof oo ku nool Mareykanka iyo Kanada ayaana daawanayay bandhigga.
Dhowr sano gudahood markii uu soo kordhay sawirka filimka, filimadu waxay ka soo wareegeen riwaayad cusub oo waxayna u wareegeen warshad madaddaalo oo ballaaran. Filimada laga soo raray singl.
Warshadaha filimada ilaa 1906-dii
Sannadkii 1896-dii, waxaa caddaatay in lacag badan lagu sameyn karo iyadoo la tusaayo filimada muraayad leh dhagaystayaal aad u tiro badan intii lagu soo bandhigi lahaa mashiinnada bandhigga ee Edison’s Kinetoscope peep. Shirkadda Edison ayaa soo bandhigtay mashruuc uu soo saaray Armat iyo Jenkins, “Phantoscope“, kaas oo loo bixiyay: Vitascope, waxayna ku biirtay makiinado kala duwan oo wax soo saara oo ay sameeyeen dad kale si ay u soo bandhigaan 35-mm. Filimo shaashad ballaaran leh oo ay sameysay shirkadda Edison iyo kuwa kale oo ka jira Faransiiska iyo Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, shirkadda filimka ugu guulaha badan ee Mareykanka ayaa ahyed soo saarka filimda ugu weyn adduunka ilaa 1900-kii waa hirkadda Mutoscope ee Mareykanka. Tan markii hore waxaa loo sameeyay si looga faa’iideysto filimada loo yaqaan ‘peep-show movies’ iyadoo la adeegsanayo qaabab ka yimid W.K.L. Dickson ka dib markii uu ka tagay shirkadda Edison 1895. Qalabkiisa wuxuu adeegsaday 70-mm. Filim ballaaran oo qaab walbana si gooni ah loogu daabacay xaashiyo si loogu daro mashiinka ay wax ku daawadaan ee loo yaqaan Mutoscope. Go’aannada sawirka ayaa ka soo baxay cirifka durbaan wareegsan waxaana loo rogay aragga is daba joogga ah. Mutoscope ka sokow, waxa kale oo sammeeyeen borojektar loo yaqaan Biograph, kaas oo soo saari kara cadaadis filim joogto ah oo wanaagsan oo isla diidmo ah. Waxaa jiray wax soosaarayaal kale oo badan oo ka yar Maraykanka, qaar ka mid ahna waxay aasaaseen joogitaan qarniga cusub. American Vitagraph oo ka mid aheyd; soo saareyaashan yaryar, wuxuu istuudiye ka dhistay Brooklyn wuxuuna ballaariyay ganacsigiisa sannadkii 1905-tii. Laga soo billaabo 1896-dii, waxaa jiray muranno is daba joog ah oo ka dhacayay Mareykanka, kuna saabsan shatiyadaha daboolaya qaababka aasaasiga ah ee awood u siinaya sawirrada filimka.
Waddanka Faransiiska gudihiisana, shirkadda Lumière waxay u dirtay sawir qaadayaal adduunka oo dhan laga soo billaabo 1896-dii, wixii ka dambeeyay si ay u toogtaan filimada, kuwaas oo ay u soo bandhigeen si maxalli ah, ka dibna dib loogu celiyey warshaddii shirkadda ee Lyons si ay uga samayso daabacado iib ah si uu u helo qof kasta oo iyaga doonaya. Waxaa jiray ku dhowaad kun filimaan ah ilaa 1901-kii ku dhowaad, dhacdooyinka hadda jira. Sannadkii 1898-dii, Georges Méliès wuxuu ahaa soo saaraha ugu weyn ee filimada mala-awaalka ah ee Faransiiska, wixii waqtigaas ka dambeeyayna, wax soo saarkiisu wuxuu ahaa filim leh saamayn khiyaano ah oo aad ugu guulaystay dhammaan suuqyada. Caannimada gaarka ah ee filimadiisa dhaadheer oo dhowr daqiiqo ka dheeraayey 1899-kii iyo wixii ka dambeeyay (halka inta badan filimada kale ay weli hal daqiiqo oo kaliya socdeen), waxay u horseedday soo saarayaasha kalena inay billaabaan soo saarista filimo dheeri ah.
Laga soo billaabo 1900, Charles Pathé wuxuu billaabay soo saarista filimka hoostiisa magaca Pathé-Frères, iyadoo Ferdinand Zecca loo shaqeeyay inuu si dhab ah u sameeyo filimada. Sannadkii 1905, Pathé waxay ahayd shirkadda filimada ugu weyn adduunka, jagadaas oo ay haysay ilaa dagaalkii koowaad ee adduunka. Léon Gaumont wuxuu billaabay soo saarista filimka 1900, iyada oo wax soo saarkiisa uu kormeerayay Alice Guy. England gudaheeda, Robert Paul, James Williamson iyo G.A. Smith iyo soosaarayaasha kale ee yar yar waxaa ku soo biiray Cecil Hepworth 1899, dhawr sano gudahoodna wuxuu soo bandhigay 100 filim sannadkii, shirkaddiisuna waxay noqotay tii ugu waynayd ee xilligaas.
Bandhigga filimka masraxa Ingiriiska:
Markii hore filimada badanaa waxaa lagu soo bandhigi jiray cibaaro ka dhacda goobaha gaarka ah, balse, hababka ugu muhiimsan ee carwada ayaa si dhaqso leh ku noqotay walax ka mid ah barnaamijyada tiyaatarrada kala duwan ama u safraya showman tiyaatarada teendhada ah oo ay ku soo qaateen carwooyinka magaalooyinka dalka. Waxay noqotay dhaqanka shirkadaha wax soo saara inay si toos ah uga iibiyaan daabacadaha kuwa wax soo bandhigaya, cadad aad u badan cagtiiba, iyadoon loo eegin mawduuca. Qiimaha caadiga ah markii hore wuxuu ahaa 15 senti oo cag ah dalka Mareykanka iyo hal shilin oo cag ah Ingiriiska. Filim gacmo midab leh oo ay soo saarayeen maaddooyinka ugu caansan ka hor 1900, waxay ku baxayeen 2 ilaa 3 jeer cagtiiba. Waxaa jiray wax soo saareyaal kooban, sida American Mutoscope iyo Biograph Company oo aan iibin filimadooda, balse, looga faa’iideysto kaliya qaybaha ay ku soo bandhigaan. Tiyaatarkii ugu horreeyay ee guuleysta ee aan filimada mooyee wax kale ka soo muuqan wuxuu ahaa: “The Nickelodeon” oo laga furay Pittsburgh sannadkii 1905. Taariikhdaas waxaa ugu dambayntii jiray filimo ku filan dhowr daqiiqo oo la heli karo si loo buuxiyo barnaamij soconaya ugu yaraan nus saac kaas oo la beddelo toddobaadle markii dhagaystayaasha maxalliga ahi ay ku caajisaan. Bandhigayaal kale oo ka socda Mareykanka ayaa si dhaqso leh u raacay, dhowr sano gudahoodna waxaa jiray kumannaan ka mid ah nickelodeons-ka oo shaqeynaya. Xaaladda Mareykanku waxay horseedday koror ballaaran oo adduunka ah soo saarista iyo bandhigga filimada laga soo billaabo 1906-dii iyo wixii ka dambeeyay.
Hindisaha iyo horumarka filimada shineemo:
Kaamirooyinka hore ee filimka waxaa lagu dhajiyay madaxa safarka iyada oo la siinayo qalab fudud oo keliya. Kaamirooyinkan ayaa si wax ku ool ah loo hagaajiyay intii ay socdeen toogashada, dhaqdhaqaaqyadii ugu horreeyay ee kamaraduna waxay ahaayeen natiijada kaamiro lagu rakibay gaari soconaya. In kasta oo waqtiga saxda ah aan la ogeyn, haddana horraantii 1895-tii, Auguste iyo Louis Lumière waxay billaabeen duubista 10 taxane oo gaagaaban ayaga oo adeegsanaya, shaneemadooda shay-badeedka cusub ee la sameeyay si loogu bandhigo dadweynaha. Taxanahaas oo socday qiyaastii midkiiba konton ilbiriqsi, ayaa lagu sawiray nolol maalmeedka, labadaba Faransiiska iyo adduunka oo dhan. Kamiradii ugu horreysay ee wareegaysa ee loogu talagalay qaadashada tallaallada digniinta waxaa dhistay Robert W. Paul sanadkii 1897-dii, munaasabadda Dayib Jubilee ee Queen Victoria. Wuxuu u adeegsaday kamaraddiisa inuu ku toogto safka hal toogasho. Qalabkiisa ayaa kaamirada lagu rakibay dhidib toosan oo lagu rogi karo dixiriga si loogu riixo iyada oo loo rogayo aaladda gacanta, Bawlosna wuxuu galiyay iibka guud sannadkii xigay. Rasaastii la qaaday iyadoo loo isticmaalayo madaxa “digniinta” ayaa sidoo kale loo yaqaan ‘panoramas’ oo ka mid ah buugaagta filimka.
Georges Méliès oo sixiroole hore ahaa ayaa ku lug yeeshay filimka sidii waddo uu ku sii wanaajin karo riyadiisa khayaaliga ah” oo loo arkayey “aabbaha saamaynta gaarka ah leh”, wuxuuna dhisay mid ka mid ah istuudiyaha filimka ugu horreeya bishii may 1897-dii. Waxay lahayd saqaf muraayad ah iyo saddex gidaar oo muraayad ah oo la dhisay ka dib markii lagu dayday istuudiyaha waaweyn ee sawir qaadista ah, waxaana lagu rakibay maro cudbi khafiif ah oo loo kala bixin karo saqafka hoostiisa si loogu faafiyo fallaadhaha tooska ah ee qorraxda maalmaha qoraxdu jirto.
Laga billaabo 1896-dii, Méliès wuxuu sii waday inuu soo saaro, hago oo u qaybiyo 500-filim oo gaagaaban. Inta badan filimadani waxay ahaayeen kuwo gaaban oo hal filim lagu dhameystiray hal qaadasho. Méliès wuxuu is barbardhig badan ku sameeyay filimka iyo masraxa, taas oo ka muuqatay shaqadiisa. Wuxuu garwaaqsaday in filimku siiyay awood isagoo adeegsanaya waqti lumis sawir qaadis ah inuu soo saaro muraayadaha muuqaalka ah ee aan lagu gaari karin masraxa.
Fulinta Mary Stuart oo ay soo saartay Shirkadda Edison si loogu daawado Kinetoscope, ayaa muujisay Mary Queen of Scots oo lagu fulinayo iyadoo si buuxda loo daawanayo kaameradda. Saamaynta waxaa lagu gaadhay iyadoo lagu baddalayo jilaa jilitaan tallaalka ugu dambeeya. Farsamada loo adeegsaday filimka ayaa loo arkaa inay tahay mid ka mid ah adeegyadii ugu horreeyay ee la ogaa ee saamaynta gaarka ah ku leh filimka. Georges Méliès wuxuu kaloo farsamadan u adeegsaday sameynta Escamotage dun dame chez Robert-Houdin (The Vanishing Lady). Haweeneyda waxaa loo arkaa inay ku baaba’ayso iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka dhaqaaqa joojinta.
Muuqaal la dhex geliyay muuqaal wareeg ah oo muujinaya “aragti riwaayadeed” Santa Claus (1899)
Farsamadii kale ee aasaasiga ahayd ee filimada khiyaanada ah waxay ahayd labanlaab soo bandhigidda filimka kamaradda. Tan waxaa hormood ka ahaa George Albert Smith bishii Luulyo 1898-dii England. Qalabka ayaa lagu duubay madow, ka dibna tallaalka weyn, diidmada ayaa dib loogu muujiyay goobta dusha sare ah. Walaalihiis The Corsican Brothers waxaa lagu sharraxay buugga ‘Warwick Trading Company’ 1900-kii. “Sawir qaadasho aad u taxaddar leh cirfiidka ayaa u muuqday mid hufan, Ka dib markii uu muujiyay in lagu dilay seef-riix oo uu codsaday aargudasho, waa la waayey aragtidaas ayaa markaa u muuqata mid muujineysa murugada dhimashada ee barafka. ”
G.A. Smith sidoo kale wuxuu billaabay farsamooyinka saameynta gaarka ah leh ee dhaqdhaqaaqa dib u celinta. Wuxuuna tan ku sameeyay ayadoo ku celcelinaya ficilkii mar labaad, intii aad ku duubeysay kaamiro rogtay, ka dibna ku biiray dabada labaad ee taban iyo tan hore. Filimadii ugu horreeyay ee lagu sameeyo isticmaalka aaladdan waxay ahaayeen Tipsy, Topsy, Turvy iyo Rinjiraha astaanta saxeexa. Tusaalaha ugu horreeya ee noocan ah ee farsamadan waa Smith’s House The Jack uu dhisay, oo la sameeyay ka hor Sebtember 1900-kii.
Cecil Hepworth wuxuu sii qaatay farsamadan, isagoo daabacay taban ee dhanka hore gadaal u qaabeysan, sidaasna ku soo saaraysa daabacaad ficilkii asalka ahaa oo si sax ah looga rogay. Si tan loo sameeyo wuxuu dhisay madbacad gaar ah taas oo taban ee ku dhex socota borojektar loogu tala galay albaabka kamarada iyada oo loo marayo muraayad gaar ah oo bixinaysa sawir isla eg. Nidaamkan waxaa loogu yeeray: “daabacaadda saadaasha”, aakhirkiina “daabacaadda indhaha”.
Adeegsiga xawaaraha kamaradaha kala duwan ayaa sidoo kale ka soo muuqday ilaa 1900 filimadii Robert W. Paul iyo Hepworth. Bawlos wuxuu muuqaallo ka duubay gawaarida Runaway ee loo maro Piccadilly Circus (1899) iyadoo kaamirada ay si tartiib tartiib ah u soo jeesaneyso. Markii filimka loo qorsheeyay 16-loox oo caadi ah halkii ilbidhiqsi, muuqaalku wuxuu u muuqday inuu xawaare sare ku marayo. Hepworth wuxuu adeegsaday saameyn ka soo horjeedda madaxa Hindiya iyo budada Seidlitz (1901). Dhaqdhaqaaqa Taliyaha ayaa xawaareynaya kaamirada oo aad uga dheereysa 16 wareeg sannadkiiba. Tani waxay ina siineysaa waxa aan ugu yeeri karno “dhaqdhaqaaq gaabis ah”.
Tafaftirka filimka iyo sheekooyinka joogtada ah:
Filimadii ugu horreeyay ee ka koobnaa wax ka badan hal tallaal ayaa soo muuqday dhammaadka qarnigii 19-aad. Tusaale kale oo xusid mudan wuxuu ahaa filimkii Faransiiska ee nolosha Ciise Masiix, La vied. Sii wadista filimka dhabta ah ee ku lug leh ficil ka guurista hal taxane oo u wareejinaya mid kale, waxaa loo aaneynayaa hormoodka filimka Ingiriiska Robert W. Paul Come Along, Do!, Oo la sameeyay 1898 iyo mid ka mid ah filimadii ugu horreeyay ee soo bandhiga wax ka badan hal toogasho. Markii ugu horreysay ee la toogto, lamaane waayeel ah oo ku sugan bannaanka carwo farshaxan oo ay ku qadeeyaan ka dibna ay daba socdaan dad kale oo albaabka ka soo galaya. Talaalka labaad wuxuu muujinayay waxa ay gudaha ka sameeyaan. Bawlos ‘Kaamirada Sawirka ee Bawlos 1 ee 1895 wuxuu ahaa kamaradii ugu horreysay ee soo bandhigta cranking-ka, taas oo u oggolaatay isla sawirada filimka in la soo bandhigo dhowr jeer sidaa darteedna loo abuuro jagooyin heer sare ah iyo bandhigyo badan. Farsamadan ayaa markii ugu horreysay loo adeegsaday filimkiisii 1901 ee Scrooge, ama Marley’s Ghost.
Horumarinta sii socotay ee waxqabadka sii socoshada filimada 1899-kii ee iskuulka Brighton ee England. Qeybtii dambe ee sannadkaas, George Albert Smith wuxuu ku sameeyay dhunkashada Tunnelka. Filimkan wuxuu ku billowday toogasho ka timid “phantom ride” barta tareenka uu ka galayo tunnelka, wuxuuna kusii waday ficil ku saabsan set matalaya gudaha gawaarida tareenka, halkaas oo nin uu dhunkasho ku xado haweeney, ka dibna dib u gooya cirbadda ciridka markii tareenku ka soo baxo tunnelka. Bil ka dib, shirkadda Bamforth ee Yorkshire waxay sameysay qeyb ka mid ah filimkaas oo isla cinwaankaas ku jira, kiiskaasna waxay ku duubeen darbooyin tareen soo galaya kana tagaya tuneel ka soo haray waddooyinka, kuwaas oo ay ku biireen ka hor iyo ka dib dhunkashada gudaha qolka tareenka.
La soco qeybaha xiga haddii Alle idmo, axad walba.
W/Q: Xasan Maxamed Xaaji ”Xasan Duusoos”